Ny Tompo no mifehy izao rehetra izao
"22 Moa efa niditra tany amin’ny firaketana ny oram-panala va hianao? Ary efa hitanao va ny firaketana ny havandra, 23 Izay voatahiriko ho amin’ny andro fahoriana, dia ny andro misy ady sy tafika? 24 Aiza moa no làlana izarazarana ny mazava Sy ielezan’ny rivotra avy any atsinanana ho et? ambonin’ny tany? 25 Iza moa no nihady lalan-drano ho an’ny ranonorana mirotsaka be, sy lalan-kaleha ho an’ny helatry ny kotrokorana, 26 Handatsaka ranonorana ambonin’ny tany izay tsy itoeran’olona, dia any amin’ny efitra tsy misy mponina, 27 Mba hahavonto ny efitra sy ny tany foana, ary hampitsimoka ny ahitra vao mitsiry? 28 Manan-dray va ny ranonorana? Ary iza kosa no miteraka ny ranon’ando? 29 Kibon’iza moa no nihavian’ny ranomandry? Ary ny vongam-panala avy amin’ny lanitra, iza no niteraka azy? 30 Tonga mafy toy ny vato ny rano, Ary mitambatra ny fanambonin’ny lalina. 31 Mahavona ny kofehin’ny Ikotokelimiadilaona va hianao, ary mahavaha ny Telonohorefy? 32 Mahavoaka ny Mazarota amin’ny fotoany va hianao? Ary mahatondra ny Bera mbamin’ny zanany va hianao? 33 Fantatrao va ny lalàn’ny lanitra? Ary manendry ny fanapahan’ireny ny tany va hianao? 34 Mahasandratra ny feonao ho amin’ny rahona matevina va hianao, Mba hanafotra anao ny rano mandriaka? 35 Mahay mandefa ny helatra va hianao, ka ho avy ireo hilaza aminao hoe: Indreto izahay? 36 Iza moa no nanao ny rahona matevina ho fitoeram-pahendrena, Ary irer? miseho er? an-danitra ho fampisehoana ny fahalalana? 37 Iza moa no manam-pahendrena mahisa ny rahom-potsy manify? Ary iza no mahatankina ny fitoeran-dranon’ny lanitra, 38 Hitambaran’ny vovoka ho dilatra sy hivonganany ho bainga?" Joba 38:22-38
Iza no…? Miverina im-pito izany fanontaniana izany eto amin’ity andalana jerentsika ity (25, 28, 29a, 29b, 36, 37a, 37b) entin’Andriamanitra hilazana fa Izy no manapaka sy mitondra izao rehetra izao dia ny zavaboahary izay noforoniny sy nohariany. Fanontaniana sarotra valiana avokoa izay tsy maintsy mihafara amin’ny hoe: Tsy misy olombelona mahavaly izany rehetra izany, ary na dia tsy te hanaiky ny fisian’Andriamanitra aza, tsy maintsy manaiky fa misy loharano nipoirana ireo fanontaniana rehetra ireo.
Ianao? Mitodika amin’i Joba indray ny fanontaniana manaraka manomboka eo amin’ny andininy faha-31 ary miverina in-dimy izany (31, 32, 33, 34, 35). Fanontaniana tsy hisy afaka hamaly na dia iray aza amin’ny olombelona rehetra. Mbola hanehoan’Andriamanitra fa tsy takatry ny sain’olombelona ny firindran’ny zavaboahary nohariany. Ny hany ataon’ny olombelona dia ny mandinika ny firindran’izy ireo fotsiny ihany. Izay tian’Andriamanitra hambara amin’i Joba eto dia ny hoe: raha ireo rehetra voalazako ireo tsy hainao hazavaina sy valiana, ahoana no hanontanianao Ahy ?
Lalina indrindra ny sain’Andriamanitra. Asehon’ Andriamanitra izany amin’ny fifehezany ny fiainan’ny zavaboahary nohariany: Mampitsimoka ny ahitra vao mitsiry (27b); Miteraka ny ranon’andro (28); nihavian’ny ranomandry (29); lalàn’ny lanitra (33).
Mbola Izy Andriamanitra ihany. Manantitrantitra ny fahamarinana momba Azy Andriamanitra amin’ireto andininy telo farany (36, 37, 38) fa Izy no manapaka izao rehetra izao. Anisan’ny teny asongadiny ao ny hoe:”fahendrena” izay hitondrany sy hifehezany ny firindran’ny zavaboahary.
Nomeny fahendrena. Raha lehibe sy hendry ny Andriamanitra ivavahantsika, tokony ho taratra amin’ny fiainantsika koa izany ka hahatonga ny manodidina antsika ho liana sy voasarika hanaraka Azy. Izany no fijoroana ho vavolombelona azo tsapain-tànana.
Fanontaniana: Inona no fahendrena nomen’Andriamanitra anao hanehoanao ny fahalehibeazany eo amin’ny fiainanao?